Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ndị njem nlegharị anya Seychelles na Emirates ụgbọ elu nabatara GCC Media
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Ndị Seychelles na ndị ọbịa Emirates GCC Media
Dị ka akụkụ nke mmekọrịta ọhụrụ ha, ndị njem ụgbọ mmiri Seychelles na Emirates haziri njem ụbọchị atọ site na Septemba 3 ruo 26 29, na-amata ndị nnọchi anya ụlọ mgbasa ozi GCC ama ama na ịma mma nke agwaetiti Seychelles.
Seychelles amalitela mgbasa ozi ka ukwuu iji wulite ntụkwasị obi na njem na mba ahụ.
Ogwe ndị njem mere njem mgbasa ozi na ọtụtụ ụlọ mgbasa ozi GCC.
Egosiputara bụ nlebara anya obodo ahụ n'ịhụ na ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa yana nke ndị na -ahụ maka njem, ndị ọrụ na ndị obodo.
Ndị nta akụkọ sitere na Khaleej Times, Gulf News, Emarat Al Youm, na Kul Al Usra, bụ ndị a nabatara na LXR Mango House Seychelles, ụlọ oriri na nkwari akụ ọhụrụ nke Mahé na Anse aux Poules Bleues na oke osimiri ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ.
Akụkụ nke mgbasa ozi ka ukwuu iji nyere aka wughachi ntụkwasị obi na ya gaa na agwaetiti paradaịs oke osimiri Indian mara mma ma gosipụta nkwa nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu inye ohere ịnweta ebe dị elu, njem mgbasa ozi ọhụrụ a gosipụtara ụfọdụ ngwaahịa na ahụmịhe kacha mma n'agwaetiti ahụ ka ọ na-akọwapụta mba lekwasịrị anya n'ịhụ ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa yana nke ndị na-ahụ maka njem, ndị ọrụ. , na ndị obodo.
N'ikwu okwu banyere mmekorita, ndị Njem nlegharị anya Seychelles Onye nnọchi anya Dubai, Ahmed Fathallah kwuru, sị: “Mmekọrịta anyị na ndị ụgbọ elu Emirates ka na -esiwanye ike ma na -agbasi mbọ ike ka oge na -aga. Anyị nwere ihe ùgwù ịhụ n'onwe anyị ebe nlegharị anya dị ịtụnanya nke agwaetiti ndị ahụ, yana ịhụ mgbagwoju anya ọdịbendị na ịma mma nke Seychelles; ọ bụ ihe a na -agaghị echefu echefu, enwere m olileanya na ndị ọzọ ga -enwekwa ike ịhụ ha. Site na mmekorita ọhụụ na -aga n'ihu, anyị ga -aga n'ihu na -enye ndị niile na -achọ ịga njem n'enweghị nsogbu. "
Mmekọrịta dị n'etiti ndị njem nlegharị anya Seychelles na Emirates nwere usoro mgbasa ozi nke a na -ebutekarị na mpaghara GCC, nke na -eguzo ugbu a dị ka otu n'ime ahịa isi mmalite ahịa n'agwaetiti ahụ.
# njem na-ewu ụlọ